मधुपर्क २०६८ असार – मझेरी डट कम
सरल भावका कविता
संविधानलेखनमा लाग्नलाई पेशा, व्यवसाय र व्यवस्ताले अवरोध पुर्‍याउँदैन, यदि उसमा इच्छाशक्ति छ भने भन्ने कुराको प्रमाण धेरै साहित्यकारहरूमा भेट्टाइसकिएको छ ।
आधुनिक नेपाली काव्यजगत्का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भूपि शेरचनको कृतित्वको विषयमा तयार पारिएको कृति हो ‘सिर्जनाका परिधिमा भूपि शेरचन’ । यसका कृतिकार हुन् सुकुम शर्मा ।
साहित्यमा सहलेखन तथा संयुक्त सङ्ग्रह प्रकाशन धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ र अहिले पनि विभिन्न विधाका पुस्तकहरू प्रकाशन भैरहेका छन् ।
रोशन शेरचनको संवेदनशील हृदयमा अटेसमटेस प्रौढ अनुभूतिका पत्रहरू छन् । तिनी यिनै अनुभूतिको अभिव्यक्तिको जोखिम मोल्न तत्पर युवा स्रष्टा हुन् ।
गजलमा लोकतान्त्रिक चेतना
साहित्यका चार विधामध्ये गजल सबभन्दा पुरानो विधा कविताअन्तर्गत पर्छ । नेपाली साहित्यमा गजलको सुरुआत माध्यमिक कालबाट नै सुरु भएको हो र यसको सुरुआत गरेका हुन्- मोतीराम भट्टले ।
डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमको सम्पादनमा देखापरेको ‘सनत रेग्मी ः सिर्जनसंवाद’ अन्तर्वार्तासङ्ग्रहको क्षेत्रमा एउटा गहकिलो कदम हो ।
घनेन्द्र ओझा पछिल्लो समयमा बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित देखिन्छन् । उनले विभिन्न पत्रपत्रिकाको सम्पादन पनि गरेका छन् ।
वर्तमान समय-सन्दर्भमा नेपालको राजतन्त्र इतिहासको विषय बनिसकेको छ । यो हिजो थियो तर आज छैन । यही इतिहाससम्बद्ध विषयहरू प्रस्तुत गर्दा असम्बद्ध र अर्थहीन कुराहरूबाट टाढा रही वास्तविक यथार्थको ज्ञान दिने र यसका माध्यमबाट सम्बद्ध विषयवस्तुको तत्त्वबोध गराउने आफ्नै किसिमको सत्प्रयास कवि नीलकण्ठ भट्टराईले प्रस्तुत पुस्तक ‘शाह-शृङ्खला’मा गरिएको पाइन्छ ।
नेपाली समालोचनामा नेत्र एटम सुपरिचित नाम हो । पचासको दशकदेखि लेख्न थालेर छोटो समयमै सुपरिचित हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।
पूर्व ४ नम्बर भोजपुरबाट खाजा-सामलको पोको बोकेर म्याट्रिकको परीक्षा दिने सिलसिलामा वि.सं.२०१४ सालमा उहाँ काठमाडौँ छिर्नुभएथ्यो । त्यतिबेलासम्म म्याट्रिकको परीक्षा दिन काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
कालो बादल उडिरहेको आकाशतिर एकनास टोलाउँदै जोनले भन्यो-“जेनी तिमीले छिट्टै कुनै एउटा निर्णयमा त पुग्नै पर्छ ।” महिनौँदेखि यो दम्पति उहापोह र असमञ्जसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए ।
मनको अध्ययन नै मान्छेको अध्ययन हो, किनकि मान्छे भनेको नै मन हो । मनको अध्ययन मनले नै गर्नु पर्नाले अर्थात् साधन र साध्य एउटै हुनाले मनको अध्ययन सहज हुन्न ।
राजधानीमा कुचुर्किएर टुकुटुकु दैनिकी चलाउँदा खुम्चिएको शरीर, मन र मस्तिष्क नागढुङ्गाबाट ओरालो लाग्नासाथ तनक्क तन्किएर सिङ्गो शरीर नै उमङ्गले भरिएको अनुभव आफैँ हुन्छ ।
गोलो टेबल छ ।
टेबल वरिपरि मेचहरू छन् ।
मेचमैँ आसन जमाएका पाँच व्यक्तिहरू छन् ।
पाँच गिलासहरू त्यसै गोलाकार वृत्तमा छन् ।
चोर दर्शनका विरुद्ध
सप्पै चोर हुन् । सप्पैलाई आगो लाएर जलाइदिनु पर्छ या बमले उडाइ दिनुपर्छ । पार्टी पनि सप्पै चोर ! नेताहरू पनि सप्पै चोर ।’ यस्तो बोल्दै हिँड्ने मान्छेलाई तपाईंले कतै भेट्नु भएको छ ?
बूँदजी !, काठमाडौँमा घर बनाउनु भो ? केही समय यतादेखि मेरा परिचितहरूले मसँग सोध्ने गरेको प्रश्न हो यो । यो प्रश्न सोध्नेक्रम घट्लाजस्तो लाग्दैन, बरु बढ्ला ।